China Yakasarudzika PP kubhururuka Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Quotation - Angel Garment Accessories Co., Ltd.
Imba > Webbing > Mikwende webhu > PP webhu
PP kurukwa kunoitwa nemhando dzakasiyana dzewindow sezvinhu zvakasvibira kuita machira machira Kune akawanda marudzi ePPP ribhoni jira, anoshandiswa zvakanyanya mune zvipfeko, shangu, mabhegi, indasitiri, kurima, zvekushandisa zvemauto, zvekufambisa uye nezvimwe zvikamu zveindasitiri.
1. Kuunzwa kwechigadzirwa chePP webhu:
PP kurongedza is yakagadzirwa nemarudzi akasiyana siyana senge mbishi kuita jira rakamanikana.Kune akawanda marudzi ePPP ribhoni jira, anoshandiswa zvakanyanya mune zvipfeko, shangu, mabhegi, maindasitiri, kurima, zvekushandisa zvemauto, zvekufambisa uye nezvimwe zvikamu zveindasitiri.Muma1930, ribhoni rakagadzirwa nemaoko kugadzirwa kwemusangano, zvigadzirwa zvekotoni tambo, hemp tambo.Mushure mekugadzwa kweNew China, ribhoni ine mbishi zvigadzirwa zvishoma nezvishoma zvakagadzirwa kuita nylon, vinylon, polyester, polypropylene, spandex, viscose, kugadzira knitting, kuruka, kuruka zvikamu zvitatu zvehunyanzvi, jira dhizaini ine yakajeka weave, twill, satin, jacquard, rakapetwa kaviri, rakapetana, rakapetana uye rakabatana sangano.
2. Chigadzirwa parameter yePP webhu:
Yakasarudzika kana yedu yakagadzirira pateni
Mavara akasiyana anowanikwa
Eco-Shamwari, AZO yemahara, Kumusoro kushinga
Nguo, Kumba Kwemachira, Bhutsu nemabhegi
Yemahara sampuro inowanikwa
100000 mayadhi pavhiki
Kutenderedza 7 - 10 mazuva
EXW, FOB uye CIF
Mhepo, Gungwa, Express (musuo nesuo kutumira DHL EMS FEDEX UPS)
Rumwe rwakapetwa mu polybag, kunze is ekisoni makatoni, kana zvinoenderana nechikumbiro chako.
3.Izvo vatengi vane hanya nazvot
4. Mirayiridzo yekushandisa chigadzirwa chePP webhu:
5.Kupaka uye kutakura
Chigadzirwa zvakanakiraPP webhu:
Kupisa kupisa:polyester inogadzirwa nekunyungudika kutenderera. Iyo yakaumbwa fiber inogona kunyungudika nekupisa zvakare. Izvo ndezve thermoplastic fiber.Iko kunonyunguduka kwepolyester kwakanyanya kukwirira, uye yakatarwa kupisa kugona uye kupisa kwemagetsi kuri kushoma, saka kupisa kupisa uye kupisa kwekushisa kwe polyester fiber kwakakwirira.Iyo imwe yeakanakisa ekugadzira tambo.
Simba repamusoroNekuda kweiyo yakaderera hygroscopicity, iyo yakanyorova mamiriro simba uye yakaoma nyika simba zvakanyatso fanika zvakafanana.Impact simba rinokwana kana kukwirira kupfuura nylon, kakapetwa makumi maviri pane viscose fiber.
Hygroscopicity murombo: nyore kuoma, uye ingangoita isina kudonhedza mukunyorova zvakanyanya, hapana deformation.
Q1.Iwe uri fekitori kana kambani yekutengesa?
Isu tiri Chavo Vagadziri vemarudzi ese ewebhu. Tine yedu fekitori muQingdao.
Q2.Chii chako chikuru zvigadzirwa?
Isu tinogadzira uye tinogadzira akasiyana hembe accossories:
- Yakarukwa Elastic mabhendi & Yakarukwa Buttonhole elastic
- Yakarukwa Elastic mabhendi & Jacquard yemukati yemukati elastic & Twill Elastic Bands
- Peta pamusoro pe elastic & printa & jacquard
- Ganda rakagwamba
- Asina kutedzemuka Silicone Yakadhindwa Elastic zvisungo
- Herringbone webbing matepi & Twill webbing tambo
- Flat uye dzakatenderedza tambo, donje & polyester tambo, dzeraundi dzakatetepa tambo
Q3.Ndinogona here kuwana yemahara sampuro?
1. Kana yemuenzaniso wemu stock, sampuli mahara uye unongoda kubhadhara mari yekutumira. Kana iwe unogona kuendesa yako courier account kwatiri.
2. Kana yetsika dhizaini sampuro, iwe unofanirwa kubhadhara kune yekuenzanisira kugadzira mutengo.
Q4.Ndingawana nguva yakareba sei kuti ndiwane muyenzaniso kubva kwauri?
1.For stock stock, tinogona kutumira pakarepo.
2.Kana yemaitiro dhizaini sampuro, zvinotora mazuva 7-10 kuita, uye wozotumira kwauri.
Q5.What wako MOQ? Ini ndinogona kuraira zvidiki zvidiki kune yekutanga odha?
Yedu MOQ ndeye 3000 metres pane saizi yega yega uye yega ruvara. Isuwo tinogona kugamuchira samll odha, asi imwezve mari yakatarwa inobhadharwa zvinoenderana.
Q6: Ndeipi yako yekugadzira nguva yekuwanda kuraira? (Tora MOQ 3000 metres semuenzaniso)
Kazhinji, zvinotora mazuva gumi nemashanu kugadzirwa.
Q7.Zvinhu zvacho zvinotumirwa sei kuUS?
1.For mharidzo uye diki qantity, nhumbi achatumirwa kunze dzakawanda courier akadai DHL, Ups, FEDEX, TNT uye zvichingodaro.
2. Kune yakakura qantity, zvinhu zvacho zvichaendeswa negungwa, nendege kana neyekunze couirer.
3. Isuwo tinogona kuzviita zvinoenderana nezvamunoda.
Nylon inogadzira webhu